My Jumbo ndenye aha na-arụ ọrụ, ma m download ọsọ ka na-ejedebeghị
- Nke mbụ, chọpụta na statut « Jumbo OK »Na-etinye ya n'akụkụ aka nri nke ebe nrụọrụ weebụ dị ka n'okpuru:
Ọ bụrụ na ị na-ahụ «- Statut: Ọ dịghị Jumbo », Nke ahụ pụtara na ndenye aha gị Jumbo anaghị arụ ọrụ. Gbalịa mee ka njikọta na akaụntụ gị, na - eji bọtịnụ “Pụọ”. Okwesiri ime ka ndenye aha gị na Jumbo rụọ ọrụ.
- Ọ bụrụ na ị hụ ọkwa « Jumbo OK », Mana nbudata ọsọ gị adịghị elu karịa 220ko / s, wee lelee na bandwidth gị adịghị nwayọ site na mmemme ndị ọzọ na-anwa ibudata n'otu oge ahụ.
- Mgbe emechara gị Jumbo biko jide n'aka na ịmalitegharịa ihe nbudata gị na-aga n'ihu, Jumbo URL ga-agbanwe.
- Ikwesiri ịlele na njikọ Internetntanetị gị na-enye gị ohere ịme nbudata ngwa ngwa. Ọ nwere ike ịdị mkpa iji kọmputa ọzọ na njikọ Internetntanetị ọzọ nwalee iji chọpụta na nsogbu ahụ esiteghị na kọmputa gị.
- Iji bulie gị ibudata ọsọ ọsọ ruo na nke kachasị, anyị na-adụ gị ọdụ ibudata ma wụnye FlashGet, nke bụ mmemme n'efu na-enye gị ohere ịbawanye ọsọ nbudata gị ruo oge 10. Nwere ike ịchọta ya ebe a: http://www.flashget.com
na Sunday August 09	by rikoooo